Home Wararka Muuse Biixi oo digniin culus u diray Farmaajo, maxaa dhacay?
Muuse Biixi oo digniin culus u diray Farmaajo, maxaa dhacay?
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa si adag uga jawaabay tallaabooyinkii u dambeeyay ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku wiiqday ololihii ictiraaf raadinta ee maalmihii u dambeeyay laga waday baarlamaanka UK.
Muuse Biixi ayaa uga digay madaxda dowladda federaalka in markale ay ka dagaal gasho inay meel marto qadiyada Somaliland, wuxuuna tallaabooyinkaas uu ku tilmaamay mid sii kala fogeynaysa dadka Soomaalida ah.
“Dowladda Muqdisho iyo dadka waxaas ka talinaya waxaa u sheegeyna in waxaas ay sii kordhinayaan naceyb, kala fogaansho iyo colaad dheeraata oo ku dhex beeraysan Soomaalida dhexdeeda, caqliyad ma aha in cadaawad fogaata inay usii taagnaato ubadkeena soo socda,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Somaliland aan lagu qasbi karin ka laabashada madax-banaanideeda iyo masiirkeeda, islamarkaana ay diyaar u tahay inay wax walba u bixiso qadiyadeeda, sida uu hadalka u dhigay.
“Qaran ahaan Somaliland waxay si gaar ah ugu mahad-naqaysa jaaliyada reer UK oo si gaar ah xil iskaga saaray oo kasoo shaqeeyay howshaas, sidoo kale waxa u mahad-naqeyna cidkasta oo qadiyada Somaliland taageeraysa mid dhaqaale iyo aqooneedba.”
Waxa uu intaas kusii daray “Dowladda Somaliland iyo shacabkeeda waxay ka mideysan yihiin inay wax walba u huraan madax-banaanida iyo helida aqoonsiga wado kasta oo ay u marayaan iyo culeys kasta oo ay ku kaceyso.”
Hadalka Madaxweynaha Somaliland ayaa imaneysa xilli ay dowladda federaalka wiiqday isku day olole loogu raadinayay aqoonsiga Somaliland, kaasi oo ay wadeen xubno ka tirsan baarlamaanka UK.
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa wada-hadal telefoon ah oo uu la yeeshay Wasiirka arrimaha Afrika ee UK Vicky Ford, ku booriyay ixtiraamka midnimada iyo madax-baannaanida Qarannimo ee labada Dal.
Sidoo kale Wasiirka qorsheynta xukuumadda federalka Soomaaliya ayaa weerar shaqsi ah ku qaaday xildhibaan Gavin Williamson oo ahaa xildhibaankii barlamaanka UK horgeeyay mooshinka looga doodayay aqoonsiga Soomalailand.
Arrimahan ayaa imanaya xilli ay Somaliland dadaal badan ku bixineyso sidii ay u heli laheyd aqoonsi, inkasta oo go’aanka ah in dal madax-banaan loo aqoonsado uu ku dhaqan-geli karo heshiis dhex-mara Soomaaliya, taasi oo illa hadda u muuqan mid suurtagal ah.
Next articleNabadoon lagu dilay Muqdisho & faah faahin kasoo baxeysa
Ciyaaryahaynka weyn Ambry Thomas oo ku sugan Somaliland, howlo tabaruca kawada...